थकित अनुहार - सरल उपायहरु संग कसरी अलविदा भन्न | बेजिया
थकित अनुहारलाई कसरी अलविदा भन्न
सुसाना Godoy | 11/05/2022 12:00 | सुन्दरता
के तपाइँको अनुहार हरेक दिन थकित छ? त्यसोभए यो उत्तम सुझावहरूमा शर्त लगाएर अलविदा भन्नको लागि समय हो। यो सत्य हो कि बजारमा धेरै क्रिमहरू छन्, र हामी केही प्रयोग गर्नेछौं, तर त्यो भन्दा पहिले, यो हाम्रो दिनचर्यामा केहि परिवर्तनहरूमा शर्त लगाउन लायक छ जसले हाम्रो छालालाई सुधार गर्नेछ र त्यो थकानलाई हामीले उल्लेख गरेका छौं।
कहिलेकाहीँ यो केवल आँखा र त्यो पफ्फी पफिनेस होइन जसले हाम्रो दिन बर्बाद गर्न सक्छ। वा हप्ता। तर यो प्रकाश बिना देख्न सकिने छाला र आँखा मुनिको कालो घेरा पनि हुनेछ जसले हामीलाई त्यो रंग यति कालो छोड्नबाट रोक्छ कि यसले थकानलाई अझ बढी चिन्ह लगाउँदछ। अब यी सबैसँग तोड्ने निश्चित क्षण हो। पत्ता लगाउनू!
1 अधिक र उत्तम आराम गर्नुहोस्
2 एक मालिश संग परिसंचरण सक्रिय गर्नुहोस्
3 जहिले पनि हाइड्रेसनमा शर्त लगाउनुहोस्
4 बरफ वा धेरै चिसो पानी थकित अनुहारलाई अलविदा भन्न
5 आँखाको लागि ककडी
अधिक र उत्तम आराम गर्नुहोस्
हो, यो भन्न सजिलो छ तर हरेक दिन यसलाई पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन। किनभने धेरै पटक यो हामीमा मात्र भर पर्दैन, यद्यपि हामीले गर्न धेरै छ। यो निद्रामा समात्ने समय हो, जुन म पक्का छु कि तपाईंसँग छ। हरेक दिन केही मिनेट अगाडि सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्, सुत्नु भन्दा आधा घण्टा अघि आफ्नो मोबाइल फोन वा अन्य उपकरणहरू अलग राख्नुहोस्, साथै तातो नुहाउनुहोस्।। यी केहि चरणहरू छन् जसले शरीरलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ र जस्तै, मोर्फियसलाई हामीलाई भेट्न मद्दत गर्दछ। किनभने बाँकीमा अनुहारको सम्पूर्ण आधार र थप उज्ज्वल छाला हो। किनकि यो निद्राको समयमा हुन्छ जब कोशिका नवीकरण हुन्छ, साथै यसको अक्सिजन हुन्छ। त्यसको लागि मात्र होइन तपाईको सम्पूर्ण शरीरको लागि, जो पक्कै पनि त्यो आरामको लागि कराउँछन्।
एक मालिश संग परिसंचरण सक्रिय गर्नुहोस्
मसाजको साथ, परिसंचरण सक्रिय गर्नुको अतिरिक्त, हामी टोन गर्न सक्षम हुनेछौं र अभिव्यक्ति रेखाहरू हटाउनुहोस् साथै हाम्रो छालाको लागि थप जवान र ताजा परिणाम प्राप्त गर्नुहोस्। यसमा यी सबै फाइदाहरू र धेरै धेरै छन्, त्यसैले तपाईंले यसलाई आफ्नो दैनिक सौन्दर्य दिनचर्यामा एकीकृत गर्नुपर्छ। मसाज औंलाको छेउमा गर्न सकिन्छ र यसलाई सजिलो बनाउन केहि प्रकारको तेल वा क्रीम लगाउने मौका लिनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि तिनीहरू गोलाकार र सँधै आरोही हुनेछन्, किनकि हामी यसरी फाइदा लिन्छौं र देखा पर्न सक्ने झुर्रियाँहरूलाई अलविदा भन्छौं।
जहिले पनि हाइड्रेसनमा शर्त लगाउनुहोस्
हाइड्रेसन सधैं हाम्रो जीवनमा उपस्थित हुनुपर्छ। एकातिर, हामी यसलाई बाह्य रूपमा लागू गर्नेछौं क्रीम वा मास्कको लागि धन्यवाद। किनभने यसो गर्दा अनुहार धेरै उज्यालो देखिनेछ। तर हामी हरेक दिन पर्याप्त पानी पिउन बिर्सन सक्दैनौं, किनकि छालाले भित्रबाट पनि केहि समस्या देखाउन सक्छ। तसर्थ, हाइड्रेटेड वा हाइड्रेटेड रहनु सधैं विचार गर्ने उत्तम समाधानहरू मध्ये एक हो। निस्सन्देह, यदि तपाइँसँग धेरै पानी पिउन गाह्रो छ भने, तपाइँ सधैँ इन्फ्यूजनको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, वा कागतीको पानी।
बरफ वा धेरै चिसो पानी थकित अनुहारलाई अलविदा भन्न
थकित अनुहारलाई अलविदा भन्न पनि घरेलु उपचारबाट गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि तपाईलाई आइस क्यूबको चाल थाहा छ, जुन, जब पारित हुन्छ यसले छालालाई कडा पारेर र सूजनलाई छोडेर तुरुन्तै प्रभाव पार्छ।। त्यसैगरी, तपाईं पनि आफ्नो अनुहार धेरै चिसो पानीले धुन सक्नुहुन्छ, किनभने प्रभाव धेरै समान छ। यसले रक्तसंचार सक्रिय गर्दछ, छिद्रहरू बन्द गर्दछ र अनुहारलाई अलिकति फैलाउँछ। हामी थप के माग्न सक्छौं?
आँखाको लागि ककडी
आँखाको लागि विशेष गरी र कालो घेराको लागि, हामीले पत्ता लगाउन सक्ने धेरै घरेलु उपचारहरू छन्। तर निस्सन्देह, ताजा काटिएको काकडी स्लाइसहरू र तिनीहरूसँग केही मिनेटको लागि आराम गर्न सक्षम हुनु एक थकित अनुहार पछाडि छोड्ने उत्तम समाधानहरू मध्ये एक हो। तपाईंले पूरै टुक्रालाई आँखामाथि राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी हामीले उल्लेख गरेका छौं, वा अँध्यारो घेराहरूमा राख्नको लागि अर्धचन्द्राकारमा काट्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » थकित अनुहारलाई कसरी अलविदा भन्न
समर ध्वनि, स्प्रिंगफील्ड उत्सव संग्रह
बच्चाको आहारको लागि आइरन युक्त खानाहरू